असार १५ साइतमा उपद्रो, बाबुरामको हली रुप र सिँचाइ–मल नपाउने किसान
सरकारले असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ तर पछिल्ला वर्षमा असार १५ खेतमा गएर फोटो खिच्ने, हिलोमा उपद्रो मच्चाउने, धानको बिउ मासेर रमाइलो गर्ने मेलाको रुपमा परिणत हुँदै आएको छन् ।
धान दिवसका अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रम विवादमुक्त बनेका छैनन् । कहिले मन्त्रीले महिला किसानलाई दुर्व्यवहार गर्ने त कहिले मन्त्रीले गमलामा धान रोप्ने खालका भद्दा क्रियाकलाप रोकिएका छैनन् ।
यसपटक पनि त्यस्तै केही भद्दा र उच्छृंखल हर्कत देखिए । धान रोप्ने खेतलाई ‘ग्ल्यामर’ अवतार देखाउने मञ्च बनाइयो ।
आइतवार गोरखाको पालुङटारमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले खेतमा पसेर हलीकै स्वरुपमा रोपाइमा सहभागी भए, केही सांसदले भोजभतेरमा लगाइने ‘पार्टी सुज’मा पञ्जा लगाएर धान रोपेको नाटक गरे । केहीले शरीरमा धानको बिउ रोपे, कसैले धानको माला लगाए त कसैले हिजोमा जम्पिङ खेले ।
जतिबेला बाँके–बर्दियाका किसान पानी पर्ने आशमा आकाश हेर्दै मलखादका लागि सरकरको मुख ताक्दै थिए, त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर राख्नका लागि हिलो छोएको नाटक हुँदै थियो । टेलिभिजनको पर्दामा यी भद्दा क्रियाकलाप देख्दा सिँचाइ अभावमा धान रोप्न नपाएका किसानको मन कति कुडिएको होला ? के यस्ता क्रियाकलापले कृषि पेशामा लाग्न युवालाई प्रेरित गर्छ ? यही बाटोबाट नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ ?
सरकार आर्थिक समृद्धि र सुशासनको कुरा गरेर थाक्दैन तर मध्य असारसम्म किसानले रासायनिक मल पाएका छैनन् । पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मका सरकारले समयमा किसानलाई धान रोप्ने समयमा मल उपलव्ध नगराएर उनीहरूमाथि चरम अन्याय र बेइमानी गरेका छन् । असार १५ साइतमा मन्त्री र सांसदले गरेका भद्दा क्रियाकलापले गाउँका किसानलाई खेती कर्ममा लाग्न प्रेरित गर्ने छैन । जबसम्म किसानले समयमा बिउ र मल, लगानी अनुसार उत्पादनको समर्थन मूल्य पाउँदैनन्, तबसम्म कृषि पेशामा युवाको आकर्षण बढ्ने छैन ।
वर्षको १ दिन हिलोमा रत्यौली खेल्दैमा छिनभरमा किसानका समस्या समाधान हुने पनि छैनन् । मञ्चमा बसेर बिउको माला रोप्नेभन्दा बाबुरामले कमसेकम हिलोमा पसेर किसानको मनोबल उकास्ने काम गरेका छन् । उनी धन्यवादका पात्र छन् । यद्यपी युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न यति पर्याप्त छैन । नीति निर्माता हिलोमै पस्नु पर्दैन, किसानको हित अनुकूल नीति बनाइदिएपनि पर्याप्त हुन्छ ।
३ दशकअघिसम्म नेपालको धान कोरिया निर्यात हुन्थ्यो । अहिले नेपालले बाहिरबाट चामल आयात गरिरहेको छ । धान मात्र होइन, अधिकाशं खाद्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्ने आदत बसिसकेको छ । धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, तराकारी र फलफूलजस्ता आधारभूत वस्तुमै हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं ।
कृषिजन्य आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर नबनी आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुने छैन । त्यसका लागि किसानमैत्री नीति बनाऔं, मल र बिउमा सहुलियत बढाऔं र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाली किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजार सुनिश्चित गरौं । ३ सय ६४ दिन कृषि पेशाप्रति ओठ खुम्चाउनेले धान दिवसको नाममा किसानको मानमर्दन हुने क्रियाकलाप बन्द गरौं ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब खोस्ने सर्वोच्चको फैसलाले ल्याएको तरंग
यौनमार्फत पनि सर्छ डेंगु, स्पेनमा आयो केस काठमाडौं – सामान्यत: डेंगु रोग लामखुट्टेले टोकेर सर्ने गर्छ । तर स्पेनमा एक व्यक्तिलाई यौनका कारण डेंगु सरेको घटना भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । संसारमा पहिलोपटक यौनमार्फत डे...
सिसडोलमा थुप्रिएको फोहर व्यवस्थापन गरिँदै